Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Chelsea Oo Macasalaameeyey Blues & Farriin Qiiro Leh Oo Uu U Diray Taageereyaasha - Gool24.Net
Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Chelsea Oo Macasalaameeyey Blues & Farriin Qiiro Leh Oo Uu U Diray Taageereyaasha
Xiddiga reer Spain ee Pedro ayaa shaaciyey inuu si rasmi ah uga tegay Chelsea oo uu shantii sannadood ee ugu dambeeyey u ciyaarayay, waxaana warqad qiiro leh oo uu ciyaartoyda, tababareyaasha iyo jamaahiirta uu u diray uu ugu rajeeyey guulo.
Pedor Rodriguez oo ay da’diisu tahay 33 jir ah ayaa Chelsea u saftay 206 ciyaarood, waxaanu kula guuleystay saddex koob oo waaweyn, laakiin heshiiskii uu kula jiray naadiga oo dhamaaday darteed, waxa uu soo dhamaaday waayihiisii Stamford Bridge.
Pedro oo dhaawac kaga maqnaa Chelsea kulankii xalay ceebtu kasoo gaadhay ee ay Bayern Munich kusoo karbaashtay ayaa waxa uu kusii jeedaa waddanka Talyaaniga oo uu heshiis xor ah ugu biirayo Roma.
Sannadkii 2015 ayay Chelsea kasoo iibsatay Pedro kooxda reer Spain ee Barcelona £21.25 milyan oo Gini, waxaanu la qaaday horyaalka Premier League sannadkii 2017 markii uu joogay Antonio Conte, FA Cup oo uu la qaaday isla xili ciyaareedkaas iyo European Cup oo sannadkii hore uu la qaaday Maruizio Sarri.
Muddadii uu xidhnaa garanka Chelsea waxa uu Pedro dhaliyey 43 gool oo uu ku jiro goolkii uu finalkii Euorpa League u saxeexay kooxdiisa.
Qoraal macasalaamayn ah oo uu ku daabacay bartiisa Instagram ayuu ku yidhi: “Kaddib shan sannadood oo cajiib ahaa oo fagaarahaygu ahaa Chelsea FC, waxa la gaadhay xilligii dhamaadka. Waxaan mahad badan u celinayaa boodhka kooxda, tababareyaasha iyo ciyaartoyda aanu isku kooxda ahayn, iyo sidoo kale dabcan taageereyaasha: Waxaan idiinka mahad celinayaa khibradda inaan ka mid ahaa qoyskiina ballaadhan.
“Aad ayaan ugu faraxsanaa halkan, waxaad i dareensiiseen sidii aan gurigaygii joogo, farxad weyn ayaanay ii ahayd inaan kooxdan kula guuleystay Premier League, FA Cup iyo Europa League, sidoo kalena aanu ku tartanay mid ka mid ah horyaallada dunida ugu wanaagsan.
“Waxaan qaatay dookhii saxda ahaa, waxaan qaatay xasuuso cajiib ahaa oo aan la illoobii karin.
“Waxaan idin leeyahay macasalaama aniga oo aad ugu faraxsan in xirfadaydu halkan soo gaadhay, waxaanan aad u xiisaynayaa in bog cusub aan bilaabo. Waad mahadsan tihiin, nasiib wanaagsan ayaanan idiin rajaynayaa mustaqbalka. Hore u socda Blues!!!”